छालामा समस्या देख्नेवित्तिकै अस्पताल जाने बानी बसालौं
म्याद सकिएका सामान बेच्ने दुई जना पक्राउ ३ घण्टा पहिले
भरतपुर अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरियो
हेलम्बु च्युरीखर्कमा २० परिवार जोखिममा, उद्धारका लागि अपिल
कोरोनाका कारण एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु, गाउँ ‘सिल’
कथाकार शशीको ’उठ तिलोत्तमा’ माथि विशेष परिचर्चा
अन रक्स ग्रुप र लायन्स क्लवद्वारा चापागाउँमा रक्तदान कार्यक्रम संचालन
आइतबार, साउन १७, २०७८ ११:४१:१८ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
म्याद सकिएका सामान बेच्ने दुई जना पक्राउ
बिहीबार, असार २४, २०७८ खोजतलास
छाला हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो अंग हो, नेपाली समाजमा छालालाई खासै ध्यान पु¥याएको देखिँदैन । छालामा आउने रोगहरु उपचार नगरेमा अरु ठाउँमा फैलने, अरुलाई सर्ने, दाग बस्ने, नराम्रो देखिने तथा पूर्णरुपमा निर्मुल नहुने हुन सक्छ ।
छालामा कडा खालको एलर्जी भएमा छाला सुन्निने साथसाथै आँखा, ओठ र स्वास—प्रश्सावको नली पनि सुन्निने भएकाले उच्च जोखिम हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ । यस बाहेक औषधीको प्रयोग हुने एलर्जी पनि निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ । यस्तै पेरिफेरिमा रहेर खोजतलासले डा. छालारोग विशेषज्ञ डा. एलिना शर्मासँग खोजतालसले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः
० छाला रोग भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ, छाला रोग विशेषज्ञले कस्ता—कस्ता रोग हेर्ने गर्छ ?
छाला रोग भन्नाले शरीरको बाहिरी सतह अर्थात् छाला, नङ्ग र कपालमा आउने जुनसुकै रोग बुझ्न सकिन्छ । छाला रोग विशेषज्ञले हेर्ने रोगहरुलाई विशेषतः चारवटा विधामा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
१. Clinical Dermatology (क्लीनिकल डेरम्याटोलोजी) अर्थात् बाहिरी छालामा आउने जुनसुकै चिलाउने, नचिलाउने, दाध, छालाको रंग परिवर्तन हुने साथै नङ्ग र कपालको रोग पनि हेरिन्छ ।
२. Venereology (भेनेरलोजी) अर्थात् महिला तथा पुरुषको यौनाङ्ग सम्बन्धित सबै रोग हेरिन्छ ।
३. Leprology (लेप्रोलोजी) अर्थात् छालामा आउने लाटो, फुस्रो दाद, जसलाई सरल भाषामा कुष्टरोग भनेर चिनिन्छ, यस सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार गरिन्छ ।
४.Cosmetology (कस्मेटोलोजी) अर्थात् रोग नभएर सौन्दर्यको लागि गर्ने उपचार भन्ने बुझिन्छ । यस अन्तर्गत लेजर प्रविधिबाट छालाको कालो दाग हटाउने, खत सम्माउने, कपाल हटाउने तथा रोप्ने, कोठी, मुसा निकाल्ने जस्ताMinor surgery (माइनर सजरी)हरु पनि समावेश गरिएको हुन्छ ।
० नेपालमा विशेष गरी कस्ता छालाको रोगहरुको समस्या लिएर आउने गर्छन् ?
नेपालमा मुख्यतया शहरी र गाउँको परिवेशमा अलि भिन्न खालको छाला रोग देखिन्छ । गाउँघरतिर खेतबारीमा काम गर्ने बढी भएकोले रुख विरुवाले हुने एलर्जी, हिलोले हुने एलर्जी, सिमेन्ट, साबुन र खरानीबाट हुने एलर्जी बढी देखिन्छ । साथै सरसफाईमा अलि कम ध्यान दिएको कारणले होला लुतो, ढुसीको किटाणुले हुने रोग र घमौराको संक्रमण पनि धेरै देखिन्छ । त्यस्तै शहरी क्षेत्रका मानिस सौन्दर्यप्रति बढी सचेत भएका कारणले होला डण्डीफोर, चाँयापोतो, कपाल झर्ने, नङ्ग बिग्रेका रोगहरु बढी देखिन्छन् ।
० ठाउँ अनुसार छालामा लाग्ने रोगका प्रकृति फरक हुन्छ ?
राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । अवश्य पनि ठाउँ अनुसार रोगको प्रकृति केही भिन्न देखिन्छ । तराई भेगमा गर्मी बढी भएका कारण पसिना बढी जम्छ र ढुसीका किटाणुको कारण रोग र धर्मेराहरु बढी देखिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा भने चिसोले छाला सुख्खा हुने कारणले गर्दा हुने एलर्जी, कपालमा चायाँ पर्ने, Seborrheic Dermatitis र हात खुट्टा फुट्ने जस्ता समस्याहरु बढी मात्रामा देखिन्छ ।
० छालालाई स्वस्थ राख्न कस्ता उपायहरु अप्नाउनुपर्छ ?
छाला हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो अंग हो, त्यही पनि नेपाली समाजमा छालालाई धेरै ध्यान पु¥याएको देखिँदैन । छालामा आउने रोगहरु उपचार नगरेमा अरु ठाउँमा फैलने, अरुलाई सर्ने, दाग बस्ने, नराम्रो देखिने तथा पूर्णरुपमा निर्मुल नहुने हुन सक्छ । छाला स्वस्थ राख्न राम्रोसँग सफागर्ने, राम्रो खालको Moisturizer र Sun screem पर्याप्त मात्रामा समय समयमा लगाउने गर्नुपर्दछ । Moisturizer तथा Sun screem कुन किसिमको लगाउने, कति मात्रामा लगाउने , छालाका ज्ञान सम्बन्धित विस्तृत जानकारी मेरो fb Page dreamskin_by_dr.alina मा समावेश गरिएको छ ।
० छालामा कस्ता समस्या भए तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ ?
छालामा कडा खालको एलर्जी भएमा छाला सुन्निने साथसाथै आँखा, ओठ र स्वास—प्रश्सावको नली पनि सुन्निने भएकाले उच्च जोखिम हुनसक्छ । यस्तो अवस्थालाई Angioedima पनि भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ । यस बाहेक औषधीको प्रयोग हुने एलर्जी पनि निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ ।
० पछिल्लो समय महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले छाला रोगीहरुलाई कस्तो असर पार्छ ?
मुख्यतया स्वास प्रश्वासको रोग भए तापनि कोभिड—१९ ले हाम्रो शरीरको छाला लगायत लगभग सबै अंगहरुमा असर गर्ने तथ्य अध्ययनले देखाएको छ । छालामा यो संक्रमणसँग रगत जमेर आउने खटिरा (PurPura) ठेउला जस्ता देखिने खटिरा, छालामा राता डाबरहरु पनि आउने गर्छ । त्यो सँगै स्वास्थ्यकर्मीमा लामो समय पीपीई लगाएर देखिने छालाको समस्या, Hand Sanitizer ले हातमा हुने एलर्जी जस्ता समस्या बढी मात्रामा देखिन्छ । साथै माक्सको बढी प्रयोगले हुने डण्डीफोर (Maskne) पनि धेरै देखिन्छ ।
० छालामा पनि क्यान्सर हुन्छ भन्छन्, छालाको क्यान्सर कत्तिको जोखिमपूर्ण हुन्छ ?
छालामा धेरै किसिमका क्यान्सरहरु हुन्छन्, तर विशेषगरी देखिने क्यान्सरहरु Squamous cell Carcinoma, Basal Cell Carcinoma र Basal Cell Careinoma हुन् । यी मध्ये Basal Cell Careinoma त्यति फैलिँदैन तथा शरीरको अरु अंगमा त्यति असर गर्दैन । Melanoma चाहिँ सबै भन्दा धेरै अरु अंगमा फैलने क्यान्सरको रुपमा चिनिन्छ । कोठी अचानक धेरै ठूलो भएमा, रगत बगेमा, रंग परिवर्तन भएमा Melamoma हुने सम्भावना हुन्छ ।
० सुमेरु अस्पतालमा छालाको कस्ता—कस्ता उपचारहरु सुविधा छ ?
सुमेरु अस्पतालमा छालासम्बन्धी सबै रोगहरु हेरिन्छ । हालसालै यस संस्थामा कोठी निकाल्ने, मुसा निकाल्ने, छाला पलाएको निकाल्ने जस्ता नयाँ सेवाहरु सुरु गरेका छौं ।
० छाला रोगको विषयमा जनमानससम्म पु¥याउनुपर्ने कुराहरु केही छन् कि ?
जनमानसले जान्नुपर्ने छाला सम्बन्धीका ज्ञानहरु धेरै छन् । त्यसमध्ये धेरै मैले माथि उल्लेख गरेको छु । आजकल नेपालमा सौन्दर्य सम्बन्धी पर्ने सबै उपचारहरु जस्तै छाला चाउरी परेको हटाउने, कपाल हटाउने, कमाल रोप्ने जस्ता उपचारहरु पनि गरिन्छ । यो सम्बन्धी जानकारी निकट भविष्यमा लिएर आउने छु ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २४, २०७८, १३:३९:००